AGILE ILUMBO AMAPHOYISA – eHowzit
AGILE ILUMBO AMAPHOYISA
AMAPHOYISA ophiko lwe SAPS ePortshepstone enze obekungalinelekile ngesikhathi egqoka izingubo zabasebenzi abakha umgwaqo ku Harding main road eBhobhoyi ngakwa Ganyaza efuna ukubamba abasolwa ngokukotela amaloli ehamba bese bethula izimpahla eziphakathi .
Lesehlakalo senzeka emva kokuba abshayeli bamaloli sebezwakalise ukukhathazeka ngndlela abantshelwa ngayo izimpahla abasuke beyozethula ezitolo . Ngokusho kozibonele ngawakhe nongumshayeli wetekisi yaseMarchison u Bongani Mteshane uthe abafana ababibili bakotele iloli balivula ngemuva lihamba njengoba kade kuvale isiminyaminya sezimoto kwazise umgwaqo uyakhiwa, nalapho amaphoyisa abengagayelwe mphako evele avulela ngezinhlavu zenjoloba.
“Besiitshela ukuthi abasebenzi bomgwaqo sithuke kabi uma sesibona kuqhuma isibhaxu senhlavu” kuqhuba uMteshane. Uqhuba athi sekuyinsaka vukela umchilo wesidwaba ukugqekezwa kwamaloli futhi into abahlala bey ibuka mihla namalanga, njengoba ephinge wasitshela nokuthi kukhona omunye owasinda ngokulambisa edutshulwa umnikazi weloli
Akekho olimele kulesi sehlakalo njengoba eze TG kuthiwa zivele zathi zinyawo zam ngibelethe